NiceHash dia nopotehina tamin'ny fomba ofisialy ny limiter LHR Nvidia | Avy amin'ny Linux
Darkcrizt | 08/05/2022 10:57 | Nohavaozina amin'ny 12/05/2022 22:55 | fampiharana
Tamin'ny herintaona Nvidia ho setrin'ny fangatahana be amin'ny tsenan'ny karatra grafika avy amin'ny mpitrandraka, dia nanapa-kevitra ny hamerana ny karatra sary RTX 3000 mba hahatonga azy ireo ho tsy dia mahasarika loatra, mitarika mpitrandraka maro hitady safidy hafa noho ny fihenan'ny asa fitrandrahana.
Ho setrin'ny limiter vaovao, orinasa crypto maromaro no nanomboka niasa tamina vahaolana. Teo aloha dia efa nisy ny tatitra momba ny fomba hamerenana amin'ny laoniny ny sasany amin'ireo asa fitrandrahana harena ankibon'ny tany ary toa ny orinasa Nicehash no sambany nahavita nanokatra ny fitrandrahana rehetra.
Herintaona mahery taorian'ny fampidirana ny karatra sary LHR, izao dia azonao atao ny mampiasa ny fahafaha-manao feno an'ny NVIDIA RTX 30xx GPUs, izany dia noho ny fanambarana nataon'ny mpamorona NiceHash.
Ny karatra grafika LHR dia natao hampihenana ny fahombiazan'ny Ethereum sy ny vola kripto hafa GPU hafa hatramin'ny 50%. Mahaliana fa ny algorithm NVIDIA LHR dia nosokafana voalohany taorian'ny zava-nitranga nahavoa ny NVIDIA mihitsy, taorian'ny namoahan'ny orinasa tsy nahy ny kaody mpamily tsy LHR. Nanamboatra haingana ny algorithm LHR ny NVIDIA ary namoaka dikan-teny faharoa amin'ny GPU RTX 3060. Nanomboka teo, ny karatra RTX 30 rehetra dia nivadika ho variana LHR afa-tsy ny andiany RTX 3090.
Ny mpamorona NiceHash dia anisan'ireo voalohany nanokatra 70% amin'ny algorithm LHR. Tratra tamin’ny volana aogositra lasa teo io tanjona io. Noho izany, naka 9 volana hafa vao nahita ny mekanika fanakatonana LHR sy nanafoana izany ho an'ny ankamaroan'ny SKU. Androany, ny rindrambaiko 100% dia manokatra ny karatra RTX 30 rehetra miaraka amin'ny LHR, afa-tsy ny RTX 3050 sy RTX 3080 12GB, izay mety ahitana karazana algorithm LHR vaovao izay mbola tsy voafehy.
Ny vaovao LHR unlock dia miasa amin'ny Windows ihany ary mifanaraka amin'ny ny algorithm DaggerHashimoto (Etash).
Mandritra izao fotoana izao NiceHash Quickminer ihany no manohana ny famahana avy amin'ny orinasa miafina, fa mpitrandraka malaza maro, toy ny Son of a Tech an'ny YouTube, no nandefa lahatsary mampiseho fa mifanaraka amin'ny filazany ny rindrambaiko.
Tao amin'ny lahatsoratra bilaogy, nanamafy ny toe-draharaha i NiceHash:
“Faly izahay mampahafantatra anao fa NiceHash QuickMiner (Excavator) no rindrambaiko fitrandrahana voalohany izay mamaha tanteraka (100%) karatra LHR! Ankehitriny ianao dia afaka mahazo tombony bebe kokoa noho ny rindrambaiko fitrandrahana hafa rehetra eny an-tsena raha mampiasa karatra sary LHR miaraka amin'ny NiceHash QuickMiner ianao. Ho avy tsy ho ela ny fanohanana NiceHash Miner. Izany koa dia mahatonga azy io ho tombony kokoa noho ny fitrandrahana mivantana dobo iray, satria ny rindrambaiko hafa dia tsy afaka mamoaka ny fahafahan'ny fitaovanao manontolo. Misoratra anarana amin'ny NiceHash, misintona ny QuickMiner ary mahazo karama amin'ny Bitcoin isaky ny 4 ora! »
QuickMiner dia mpitrandraka kitiho iray natao ho mora ampiasaina miaraka amin'ny maody lalao ho an'ny mpilalao sy ny overclocking mandeha ho azy (OCTune). Ampiasao ny Excavator (miaraka amin'ny 100% LHR unlock ankehitriny!) Hitrandrahana Ethereum sy XMRig ho an'ny fitrandrahana CPU.
Ao amin'ny lahatsorany bilaogy, NiceHash milaza fa tsy mbola manohana Linux:
"100% LHR Unlock dia miasa amin'ny Windows ihany." Saingy ny ekipan'ny NBMiner (NebuMiner) dia namolavola ny rindrambaiko izay manokatra 100% ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany amin'ny GeForce RTX 30 GPU amin'ny Linux.
Loharanom-baovao mihidy ireo programa roa ireo, ka tsy hitanay mazava tsara hoe ahoana no nahavaky ny LHR (tena mahaliana tokoa izany, tsy isalasalana).
Ny hita eto dia ny solosaina roa mandeha amin'ny fitaovana fanafenana malaza dia nahavita namoha ny karatra LHR tamin'ny fotoana iray. Mampametra-panontaniana izany raha nifampizara vaovao sy ny fomba nahitan'izy ireo ny fomba voalohany izy ireo.
Na izany aza, ao amin'ny Twitter, ireo mpitrandraka crypto dia nanamafy fa ny rindrambaiko NBMiner v41 dia miasa tokoa, izao no fotoana voalohany niharan'ny LHR tamin'ny Linux.
Ny vaovao kapoka ho an'ireo mpilalao nahita ny fidinan'ny vidiny amin'ny karatra grafika tato anatin'ny herinandro vitsivitsy, satria nihena ny vidin'ny vola crypto toa an'i Bitcoin ary nihatsara ny famatsiana karatra grafika, ka betsaka aza no mivarotra amin'ny MSRP (Vidiny antsinjarany atolotry ny mpanamboatra), antsoina matetika hoe vidin'ny lisitra na vidin'ny lisitra).
Na izany aza, miaraka amin'ny fihenan'ny tsena sy ny vidin'ny ankamaroan'ny cryptocurrencies, ary koa ny fiakaran'ny faktiora, ny fiantraikan'ny vaovao dia azo antoka fa latsaky ny enim-bolana lasa izay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Nopotehin'i NiceHash tamin'ny fomba ofisialy ny limiter LHR Nvidia